Turkiga: “Amiir Maxamed bin Salmaan wuu la hadlay Khashoggi daqiiqado kahor intii aan la dilin” – Radio Daljir
Oktoobar 22, 2018 4:41 g 0
Warar saaka ku baahay joornaalka dowladda Turkiga ka agdhow ee Yeni Safak ayaa lagu faafifay in ugu yaraan afar jeer uu Amiir Maxamed bin Salmaan la hadlay qunsuliyadda Sucuudiga, mar kamid ahna uu si toos ah ula hadlay Jamal Khashoggi.
Warkaan oo saaka lagu faafiyey joornaalka Yeni Safak ayaa haddii ay rumoobaan waxaa ay mar kale beeninayaan wararka isdabajoogga ee ka soo baxaya dowladda Sucuudiga, siiba warkii ugu danbeeyey ee uu faafiyey Wasiirka Arrimaha Dibadda Sucuudiga.
Wasiirka oo shalay waraysi siiyey talafishinka Fox ee dalka Mareykanka ayuu wasiirku ku sheegay in haba yaraatee aysan dowladdu la socon waxa ku dhacay Jamaal Khashoggi iyo sida loo dilay toona. Dilka Jamaal ayaa wasiirku waxa uu ku eedeeyey saraakiil amni iyo is-af-garanwaa dhexmaray ayaga iyo Jamaal. “Is-af-garanwaaga” ayaa wasiirku yiri waxa uu sababay dagaal iyo feer, dagaalkaas “ayaana ah kan sababay dilka Jamaal Khashoggi.”
Wasiirka Arrimaha Dibadda Sucuudiga Adel Al-Jubeir oo u warramaya Fox News
Warbixinta joornaalka Yeni Safak ayaa lagu sheegay in markii uu Jamaal soo galay qunsuliyadda Sucuudiga uu isla markiiba soo wacay Amiir Maxamed bin Salman. Amiirka ayaa ku amray Jamaal in uu Riyadh ku soo laabto, lana soo laabto tiimka khaaska ee uu soo diray oo watay laba diyaaradood oo khaas ah.
Jamaal waa uu diiday amarka Amiirka iyo in uu Riyadh ku soo laabto asaga oo ka cabsi qaba in haddii uu Riyadh ku noqdo isla markiiba la dili doono. Diidmadaas kabacdi waxaa Jamaal ku biloowday Ciqaab. Illaa iyo intii ciqaabtu socotana Amiir Maxamed waxa uu saraakiisha Jamaal ciqaabaysa la hadlay illaa 3 jeer oo kale.
Ciqaabaha Jamaal loo gaystay waxaa ugu horreeyey faraha oo la jaray. Sidaan wararkeennii hore ku sheegnayna mid kamid ah saraakiisha Jamaal dishay waxa uu watay miishaar uu diyaaradda khaaska ah kala soo degay, waana isla miishaarta sirdoonka Turkigu ay sheegeen in loo adeegsaday jarjarka Jamal Khashoggi.
Farajar kabacdi markii Jamaal laga maarawaayey waxaa loo qaaday qolka shirarka, waxaana la dul saaray miiska weyn ee shirarka. Miiskaas baa Jamaal markii ugu horraysay madaxa la gooyey. Markii xigteyna jirkiisa xubin-xubin loo jarjaray.
Illaa iyo intii ay ciqaabtu ku socotay Jamaal sida laga soo xiganaya sirdoonka Turkiga, Amiir Maxamed bin Salmaan waxa uu tallaabo-tallaabo ula socday ciqaabaha la marinayey Jamal Khashoggi.
Dilkii Jamaal kabacdi sirdoonka Turkigu waxa ay faafiyeen in laba gaari ay ka bexeen qunsuliyadda Sucuudiga. Gaari waxa uu abbaaray dhul duureed ku yaal bannaanka Istanbul, meesha loo yaqaan Belgrade Park.
Gaari kale oo ka baxay qunsuliyadda Sucuudiga ee Istanbuul waxa uu abbaaray magaalada Yalova oo hal saac u jirta qunsuliyadda. Booliska Turkiga ayaa hadda labadaas meelood ka baaraya wixii jir iyo lafo ka haray jarjarka Jamaal Khashoggi.
Warar kale ayaa sheegaya in xubnaha qaar ee Jamaal Khashoggi lagu qaatay boorsooyin, loolana noqday Riyadh.
Waxaa xasuus mudan in sidii loo waayey Jamal Khashoggi ay dowladda Sucuudigu faafisay warar kala duwan, kuna bilaabay in Jamal asaga oo badqaba uu soo galay qunsuliyadda, asaga oo badqabana ka soo baxay. Waxa ayna qunsuliyadda Sucuudigu ku dartay in ay hayaan caddaymo xaqiijinaya in Jamaal asaga oo nool uu qunsuliyadda ka baxay.
Cadaadis adag oo ka yimid adduunka iyo dowladda Turkiga oo adeegsanaysa warbaahinta Turkiga waxa ay maalin kasta faafiyeen warar la xiriira sida Jamal Khashoggi loo dilay iyo cidda ka danbaysay dilkiisa.
Cadaadiskaas adag ee la saaray dowladda Sucuudiga waxa uu keenay in Sucuudigu qiraan in Jamaal uu dhintay, ayna dileen saraakiil aan haysan amar dowlo.
Markii la shaaciyey in saraakiisha ay hoggaaminayeen masuuliyiin sare oo ka agdhow Amiir Maxamed bin Salman, kuna weheliyey safaradiisii Mareykanka iyo Yurub, Sucuudiga waxa uu mar kale badalay sida uu u dhintay Jamaal.
Faafinta xaqiiqada cusub ee Sucuudiga waxaa hoggaan looga dhigay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Sacuudiga Adel Al-Jubeir. Adel oo ah nin afka Ingiriiska si fiican ugu hadla, kana agdhow reer Galbeeedka, ayaa markii ugu horraysay waxa uu shalay ka soo dhex muuqday warbaahinta Mareykanka iyo Talafishinka Fox. Adel waxa uu beeniyey wararka sheegaya in Amiir Maxamed uu wax ka ogaa sida loo dilay Jamaal, waxa uuna yiri, “Amiirku waxba kama uusan ogayn sida iyo sababta loo dilay Jamal Khashoggi.”
Wasiir Adel ayaa dilka sabab uga dhigay dagaal dhexmaray Jamaal iyo saraakiisha amniga ee qunsuliyadda Sucuudiga.
Markii wasiirka la weydiiyey “aaway meydkii Jamaal?” waxa uu ku jawaabay, “annaguba baadigoob baan ugu jirnaa meesha la geeyey meydkiisa.”
Jamaal Khashoggi waxaa ugu war danbaysay Talaado 1:00 PM saacadda Istanbuul, 2 Oct 2018, markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbuul uuna ka doontay dukmentiyo uu ku quursanayo Hatice Cengiz, gabar Turki ahna qoraa sare oo caan ah. Cengiz oo laftigeeda nolosheeda loo baqayo ayaa hadda dowladda Turkigu waxa ay bilowday in ay siiso ilaalo boolis 24ka saac.
Madaxweyne Erdogan ayaa ballanqaaday in berri oo Talaado ah uu shaacin doono “run aan la barxin” sheegi doonana sida loo dilay Jamal Khashoggi iyo cidda masuuliyadda dilkaas leh.
Dowladaha Yurub oo ay ugu horreeyaan Jarmalka, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa bilaabay cadaadis cusub oo ay saaraan boqortooyada Sucuudiga. Hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa isla shalay shaacisay in dowladda Jarmalku aysan wax hub ah oo danbe ka gadi doonin Sucuudiga illaa ay boqortooyada Sucuudigu la soo shirtagaan xaqiiqada dhabta ah iyo sida loo dilay Jamal Khashoggi.
Dowladda Mareykanka ayaa ayadu weli labalabeyneysa. Madaxweyne Trump ayaan weli toos u eedeyn Amiir Maxamed bil Salman, meesha aqalka sare ee Mareykanku ay bilaabeen hawlgalinta “Magnitsky Act” ahna sharci lala beegsado dowladaha dila nindoorkooda.
Mudaharaad Aqalka Cad ee Mareykanka
Halkan kadaawo Warbixin an ka diyaarinay Wararkii ugu dambeyeey ee dilka Wariye Jamaal Khashoggi
Daljir kala soco wararkii ugu danbeeyey ee Jamal Khashoggi iyo warbixinta la filayo ee Madaxweyne Erdogan ee maalinka Talaadada.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 476 Wararka 19841